Vaovao - Torohevitra momba ny fanaovana sarontava tarehy isan'andro
Araho ireto dingana ireto hitafy, esory ary anaovy ny sarontava tarehy 3M isan'andro. Ny saron-tava isan'andro dia mety amin'ny akanjo isan'andro amin'ny toerana ampahibemaso, azo nosasana tanana ary azo ampiasaina indray amin'ny lanjany maharitra. Ny saron-tava lamba tsy ara-pitsaboana dia misy lamba landihazo roa sosona, tadivavatra azo ovaina ary tadivavarana orona natao hampiononana.
Torohevitra hotadidina ao an-tsaina
Miezaha hanana fahadiovana tsara
Sasao amin'ny rano mafana sy savony mandritra ny 20 segondra ny tananao alohan'ny hametrahana sy aorian'ny fanesorana ny sarontava tarehy 3M isan'andro mba tsy hamindrana loto na mikraoba amin'ilay saron-tava. Mampiasà saniteratera amin'ny alikaola 60% farafaharatsiny raha tsy afaka manasa tanana ianao.
Ataovy azo antoka fa tsara ny maska
Raiso amin'ny tadivavarana ny sarontava ary alao maso alohan'ny hametrahana azy. Raha mahita lavaka, ranomaso na fahasimbana hafa ianao dia atsipazo ary ampiasao ilay lavaka vaovao tsara.
Aza manindrona ny tadin'ny orona
Ny sarontava tarehy 3M isan'andro dia manana clip orza azo ovaina. Aza manidy ny orona orony, ampiasao ny tanana roa hanoroka ny tadin'ny orona mba hipetraka tsara eo amin'ny oronao sy ny tavanao.
Zava-dehibe ny fandrakofana feno
Ny sarontava dia tokony hanarona ny oronao sy ny vavanao amin'ny fotoana rehetra, na dia mihetsika ny vavanao na ny lohanao aza ianao. Ny saron-tava dia tokony hipetraka tsara sy milamina amin'ny tarehy.
Raha vao mandeha dia tohizo
Ny fakana ny saron-tavanao sy ny famonoana azy dia miteraka fotoana hiparitahan'ny mikraoba - mankany sy amin'ny vatanao. Mandritra ny imasom-bahoaka dia aza esorina ny sarontava avy eo amin'ny tetezan'ny oronao na avelao hihantona amin'ny sofina iray izany. Ny sarontava dia mandaitra raha oharina amin'ny mpampiasa, ka tohizo izany raha mbola manodidina ny hafa ianao.
Diovy dieny izao sy araka ny tokony ho izy ny sarontava
Ny saron-tava isan'andro dia tokony hosasana isaky ny ampiasaina hanampiana hampihena ny fihanaky ny mikraoba. Sasao amin'ny tanana mafana ireto sarontava ireto amin'ny rano mafana mandritra ny 5 minitra farafahakeliny. Sasao ary maina ny rivotra. Ny multipacks mety ananantsika dia midika hoe hapetraka amin'ny fitsangatsanganana maromaro ianao.
Asehoy fa miraharaha anao ianao amin'ny fanaovana sarontava amin'ny toerana malalaka.
Miaraka amin'ny halaviran'ny fiaraha-monina, ny fanaovana sarontava tarehy dia fomba iray lehibe hanehoana anao miahy ny fiadanan'ny fiarahamonina misy anao. Ny 3M Daily Face Mask dia safidy tsara aleha mandritra ny hetsika isan'andro toy ny miasa, miantsena ary mifanerasera. Fampahalalana lehibe momba ny fiarovana: Raha manana toe-pahasalamana ianao toy ny sohika, aretim-po na aretin'ny taovam-pisefoana dia mila manatona mpitsabo anao (dokotera) alohan'ny hampiasana azy ianao.
Vokatra mafana - Sitemap - AMP Mobile Saron-tava tsy miendrika 3 Ply, Saron-tava azo ampiasaina 3ply, Saron-tava Ffp3, Saron-tava 3 azo ampiasaina miaraka amin'ny Fda, Saron-tava fandidiana 3ply, Saron-tava fandidiana ambaratonga 3,